अजय देवगनका का’र’ण तब्बु कु’मा’री नै रहिन्, यी अभिनेतालाई असाध्यै माया गर्थिन् – " कञ्चनजंगा News "
अजय देवगनका का’र’ण तब्बु कु’मा’री नै रहिन्, यी अभिनेतालाई असाध्यै माया गर्थिन्
No Comments on अजय देवगनका का’र’ण तब्बु कु’मा’री नै रहिन्, यी अभिनेतालाई असाध्यै माया गर्थिन्
एजेन्सी । तब्बु हिन्दी फिल्म उद्योगकी उत्कृष्ट नायिका हुन् । चाँदनी बार होस् वा म–कबूल होस् या हैदर, तब्बुले आफ्नो अभिनयले देश विदेशमा फ्यानको मन जितेकी थिइन् । ४ नोभेम्बर १९७१ मा हैदराबादमा जन्मिएकी अभिनेत्रीको पूरा नाम तबस्सुम हा—श्मी हो । उनकी आमा(रिजवाना र बुबा(जमाल हाश्मीको सानै उमेरमा डि—भो—–र्स भएको थियो।
तब्बु सधै चर्चामा रहन्छिन्
तब्बु विभिन्न कारणले चर्चामा रहिन् । यौ—- न दु —र्व्य——– व—हा—र—-को घटना होस् वा साउथ सुपरस्टार नागार्जुनसँगको अ—फे—यर, तब्बुको व्यक्तिगत जीवन सधैं हेडलाइन बने । नायिकाले बिहीबार आफ्नो ५१ औं जन्मदिन मनाउने भएकी छिन् । तब्बु एक सफल चलचित्र अभिनेत्री हुन् जसले सन् १९८० देखि चलचित्र क्षेत्रमा काम गरिरहेकी छिन् । हेरौं उनको करियर र व्यक्तिगत जीवनका केही पक्षहरू।।।
हैदरावादबाट पढाइ पूरा गरीन्
तब्बुकी आमा स्कुल शिक्षिका थिइन् । उनी आफैं सेन्ट एनी हाई स्कूल, हैदराबादको विद्यार्थी थिइन्। १९८३ मा, तब्बु मुम्बई सरिन् जहाँ उनले सेन्ट जेभियर्स कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन गरिन्। त्यसपछि उनले बलिउडमा प्रवेश गरीन् । अभिनेत्रीलाई बलिउडमा ल्याउने श्रेय देव आनन्दलाई जान्छ, जसले तब्बुलाई आफ्नो फिल्म ुहम नौजवानुमा मौका दिएका थिए।
तब्बुले पहिलो ठूलो ब्रेक फिल्म प्रेममा पाएकी थिइन् । बोनी कपुरले निर्माण गरेको यो फिल्मले करिब आठ वर्ष लगाएको थियो । फिल्ममा तब्बुसँग सञ्जय कपूर मुख्य भूमिकामा थिए । तर फिल्मले बक्स अफिसमा खासै कमाई गर्न सकेन । यस क्रममा उनी ‘पहला पहला प्यार’ मा पनि देखिएकी थिइन् तर यो फिल्म पनि हिट हुन सकेन । तब्बु सन् १९९४ मा विजयपथबाट चर्चामा आएकी थिइन् । अजय देवगन र तब्बु अभिनित फिल्म यो वर्षकै सबैभन्दा ठूलो हिट बनेको थियो । उनले आफ्नो उत्कृष्ट अभिनयका लागि फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यू अवार्ड पनि जितेकी थिइन्।
त्यसैले तब्बुको बिहे भएन
तब्बुले अहिलेसम्म किन बिहे गरिनन्, यसको जवाफ उनले एक अन्तर्वार्तामा दिएकी हुन् । उनले अजय देवगनलाई आफ्नो बिहे नहुनुको ठूलो कारण भएको बताएकी थिइन् । वास्तवमा तब्बुका आफन्त समीर आर्य र अजय देवगन अभिनेत्रीका छिमेकी थिए । उनले तब्बुलाई भेट्ने हरेक केटामाथि न—ज—-र राख्थे । आफू वरपर कुनै केटा देखिए दुवैले मिलेर कु ——ट—– पि—– ट गर्ने गरेको उनले बताइन् । जसका कारण उनीले अहिलेसम्म विवाह गर्न सकिनन् ।
तब्बुको नाम साउथ स्टार नागार्जुनसँग जोडिएको छ । दुवैले करिब १५ वर्ष एक अर्कालाई डेट गरे तर यो स —म्ब—- न्ध विवाहसम्म पुगेन । नागार्जुन पहिल्यै विवाहित थिए र उनी आफ्नी पत्नीसँग डो——भो—-र्स गर्न चाहँदैनथे, त्यसैले दुवैको बाटो अ—ल—-ग भयो। भनिन्छ तब्बु नागार्जुनका लागि यति ग—म्भी—र थिइन् कि उनले हैदरावादमा एउटा घर समेत बनाएकी थिइन् ।
← सुत्दा किन ब्रा खोलेर सुत्ने ? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने → पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, कार्तिक १८ गते बिहीबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल